NguYeremiya 28 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 Ke kaloku, kwathi ngaloo mnyaka, ekuqalekeni kobukumkani bukaZedekiya, ukumkani wakwaYuda, ngomnyaka wesine, ngenyanga yesihlanu, wathetha kum uHananiya unyanaunyana ka-Azure, umprofetiumprofeti waseGibheyon, endlwini kaYehova, emehlweni ababingeleliababingeleli nabantu bonke, esithi,
2 Utshilo uYehova wemikhosi, uThixouThixo kaSirayeli, ukuthi, Ndiyayaphula idyokhwe yokumkani waseBhabheli.
3 Kwangale minyaka mibini izalisekileyo, ndiya kuyibuyisela kule ndawo yonke impahla yendlu kaYehova, awayithabathayo kuloo ndawo uNebhukadenetsare ukumkani waseBhabheli, wayisa eBhabheli.
4 Ndiya kubabuyisela kule ndawo oYekoniya unyanaunyana kaYehoyakim, ukumkani wakwaYuda, nabafudusiweyo bonke bakwaYuda, abaye eBhabheli, utshoutsho uYehova; ngokuba ndiya kuyaphula idyokhwe yokumkani waseBhabheli.
5 Wathi uYeremiya umprofetiumprofeti kuHananiya umprofetiumprofeti, emehlweni ababingeleliababingeleli, nasemehlweni abantu bonke abemiyo endlwini kaYehova:
6 wathi uYeremiya umprofetiumprofeti, Amen, makenjenjalo uYehova. Makawamise uYehova amazwi akho owaprofetele ukuba ayibuyise impahla yendlu kaYehova, nabafudusiweyo bonke eBhabheli, beze kule ndawo.
7 Khawuve eli lizwi ndilithethayo ezindlebeni zakho, nasezindlebeni zabantu bonke.
8 AbaprofetiAbaprofeti ababengaphambili kum nangaphambili kwakho kwasephakadeni, baprofeta imfazweimfazwe, nobubi, nendyikitya yokufanendyikitya yokufa, besingisele kumazwe amaninzi nangezikumkani ezikhulu.
9 UmprofetiUmprofeti lowo uprofeta uxolo, uya kwaziwa ukuba ungumprofeti othunyiweyo nguYehovanguYehova okunene, ekwenzekeni kwelo lizwi lomprofeti lowo.
10 Ke kaloku uHananiya umprofetiumprofeti wayithabatha idyokhwe entanyeni kaYeremiya umprofetiumprofeti, wayaphula.
11 Wathetha uHananiya emehlweni abantu bonke, esithi, UtshoUtsho uYehova ukuthi, Ndiya kwenjenje ukuyaphula idyokhwe kaNebhukadenetsare ukumkani waseBhabheli, ngale minyaka mibini iza kuzaliseka, ezintanyeni zeentlanga zonke. Wemka ke uYeremiya umprofetiumprofeti, wahamba indlelaindlela yakhe.
12 Kwafika ilizwi likaYehova kuYeremiya emvaemva kokuyaphula kukaHananiya umprofetiumprofeti idyokhwe entanyeni kaYeremiya umprofetiumprofeti, lisithi,
13 Yiya uthetheuthethe kuHananiya, uthi, UtshoUtsho uYehova ukuthi, Uzaphule iidyokhwe zomthi, ke yenza iidyokhwe zesinyithi esikhundleni sazo.
14 Ngokuba utshoutsho uYehova wemikhosi, uThixouThixo kaSirayeli, ukuthi, Ndibeke idyokhwe yesinyithi ezintanyeni zezo ntlanga zonke, ukuze zimkhonze uNebhukadenetsare ukumkani waseBhabheli; ziya kumkhonza ke; kwanamaramncwa asendle ndiwanikele kuye.
15 Wathi uYeremiya umprofetiumprofeti kuHananiya umprofetiumprofeti, Khawuve, Hananiya; uYehova akakuthumanga; wena aba bantu ubakholosisa ngobuxoki.
16 Ngako oko, utshoutsho uYehova ukuthi, YabonaYabona, ndiva kukugxotha ebusweni bomhlaba; uya kufa nonyakanje, ngokuba uthetheuthethe elokukreqa kuYehova.
17 Wafa ke uHananiya umprofetiumprofeti ngaloo mnyaka, ngenyanga yesixhenxe.
IDuteronomi 13:6, 18:20, 21, 28:48
1 Kumkani 1:36, 22:28
2 Kumkani 7:20, 24:14
2 yeziKronike 36:7, 10
UIsaya 13:1, 44:25, 26
NguYeremiya 11:5, 13:19, 20:6, 23:31, 27:1, 2, 4, 6, 16, 29:1, 2, 31, 32
UHezekile 13:6, 33:33
Amosi 1:1, 7:17